५ हजार ४४४ प्रहरी जवानको निस्कियो नाम— तपाईको पनि पर्याे कि हेर्नाेस् नाम सहित
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जनपथका लागि फाइट गरेका प्रहरी जवान को अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसार अन्तर्वार्तामा सहभागी प्रतिस्पर्धीबाट खुला, अमर–अशक्ति प्रहरी परिवार र समावेशी समूहको नतिजा आज मंगलबार प्रकाशित भएको हो ।
जसमा ५ हजार ४४४ उत्तीर्ण भएका छन् भने ८० जनाको नाम वैकल्पिक लिस्टमा रहेको छ ।
अब कहाँ कहिले सम्पर्क गर्ने त ?
प्रहरीले जनाए अनुसार जतिजा निस्किएका जवानहरुले भदौ १५ गतेभित्र नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रवेश पत्रसहित सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
कर्णाली केन्द्रका लागि कहाँ ?
प्रहरी अनुसार कर्णाली परीक्षा केन्द्रबाट उत्तीर्णहरुले भने मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जबाट आफ्नो नतिजा र अन्य काम सम्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ ।